Tim Cook wuxuu ku sharxayaa dhaqaalaha dhexdhexaadka ah ee kaarboon | Waxaan ka socdaa mac
Sabtidii la soo dhaafay waxay ka dhacday xarunta Qaramada Midoobay Shir madaxeed ku saabsan hamiga cimilada. Dhammaan dadka lagu casuumay inay isla hadalka ka hadlaan waxaa ka mid ahaa Tim Cook, oo ah madaxa shirkadda Apple. Wuxuuna ka faa’iideystay fursadda si uu u muujiyo ficilada ay ku kacday shirkadda uu u jiheeyo faa iidada meeraha. Hadalkiisa wuxuu kaloo u ololeeyay ku guuleysiga dhaqaalaha kaarboon dhexdhexaad ah.
Shirka Qaramada Midoobay ee hamiga cimilada in Waxay dhacday Sabtidii, Diseembar 12, wuxuu isu keenay shakhsiyaad aad u tiro badan oo ka socda siyaasada iyo dhaqaalaha oo leh dano guud: ku guuleysiga dhaqaalaha kaarboon dhexdhexaad ah. Tani waxay ka dhigan tahay inaad ku maal gashato tamar dib loo cusboonaysiin karo. Shirkadaha maanta iyo kuwa mustaqbalku ma soo saari karaan suno waxyeeleynaya meeraha iyo kuwa ku dul nool.
Saamaynta isbeddelka cimilada waxaa laga dareemayaa bulshada oo dhan. Shir-madaxeedku waa madal waxtar u leh u doodista kuwa si aan kala sooc lahayn ugu silcaya dhibaatooyinka ka dhalan kara kala duwanaanshaha cimilada. Shir-madaxeedku wuxuu sidoo kale u adeegaa sidii barxad loogu talagalay ganacsiyada, magaalooyinka iyo jilayaasha kale ee aan dawliga ahayn ee, marka la isku daro, iskaashanaya in la taageero dawladaha lana dardargeliyo isbeddelka nidaamka ee loo baahan yahay.
Tim Cook wuxuu difaacay muhiimada qofkasta oo inaga mid ahi ku leeyahay shaqadan. Xitaa intaa ka sii badan, hoggaamiyeyaasha waddamada ay tahay inay yeeshaanculays gaar ah oo ku saabsan wax ka qabashada deegaanka«. Wuxuu sii waday khudbadiisa isagoo ku doodaya "hal abuur cusub oo cagaar ah wuxuu bixiyaa cadeyn ah in meeraha uu hagaago." Wadajir ayaan u guuri karnaa dhaqaalaha kaarboon dhexdhexaadka ah waxaanan geyn karnaa xilli cusub oo fursado loo wada dhan yahay.
Waxaan rajeyneynaa in ereyadiisa aysan ku dhaceynin dhagaha iyo shirkadaha kale oo badan ayaa raacaya tusaalaha Apple (uma jeedo in laga qaado xeedho qalabka cusub) iyo la qabsadaan shirkadooda oo u rogaan xarumo aan wasakhda ahayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Tim Cook waxaa ka go'an dhaqaale dhexdhexaad ah oo kaarboon ah
Mats iyo xayndaab guf ah oo loogu talagalay iibinta Jimicsiga +
Ma qiyaasi kartaa Jony Ive oo ah agaasimaha guud ee Ferrari? Waxaa jira warar xan ah oo sheegaya.